काभ्रेमा आज २७३ जनाले लगाए खोप, थपिए ३ जना संक्रमित - Naulo Samachar
२०७७ चैत्र २९, आईतबार मा प्रकाशित १२९ पटक पढिएको
चैत २९, काभ्रे । काभ्रेमा आज कोरोना भाइरस विरुद्धको तेस्रो चरणको खोप अन्तरगत २ सय ७३ जनाले खोप लगाएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार तेस्रो चरणको खोप अभियानमा आज १८ जना चीनमा अध्ययन गर्ने र पढ्न जाने विद्यार्थी (हाल नेपालमा रहेका), २ जना हिमालय पार व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारी वा सहयोगी, १९२ जना शिक्षक र प्राध्यापक, ३२ जना यस अघि खोप लगाउन छुट भएका अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरु, होटल, ट्रेकिङ, बिज्ञापन र इन्टरनेट क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, औषधी, फलफूल, तरकारी लगायतका व्यापारी र २९ जना अन्यलाइ कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको हो ।
कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा ६ हजार ७ सय ९९ जना, दोस्रो चरणमा १७ हजार १ सय ६१ जनालाइ कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
काभ्रेमा थपिए ३ जना संक्रमित
यस्तै, काभ्रेमा आज थप ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार आज थपिएका नयाँ संक्रमित धुलिखेलका १ जना, रोशी गाउँपालिकामा १ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाबाट १ जना रहेका छन् ।
योसँगै काभ्रेमा आज सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या २६ पुगेको छ ।
यसैगरी काभ्रेमा हालसम्म कुल कोरोना संक्रमित संख्या ३४ सय ११ पुगेको कार्यालयको जनाएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लामा आज १ जना संक्रमितको उपचारपछि कोरोना संक्रमणमुक्त भएको कार्यालयले जनएको छ ।
थप विवरण हेर्नुहोस :-